Bannaanbax ka dhacay Beledweyne & hanjabaad culus oo loo jeediyay IGAD & Xasan Sheekh | Baydhabo Online
Bannaanbax ka dhacay Beledweyne & hanjabaad culus oo loo jeediyay IGAD & Xasan Sheekh
Magaalada Beledweyne, Xarunta gobolka Hiiraan Maanta waxaa ka dhacay dibad bax Banaanbax looga soo horjeedo urur Goboleedka IGAD, dowladda Soomaaliya iyo Shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
Waxaa bannaanbax hogaaminayay qaar ka mid ah Duubabka dhaqanka Gobolka Hiiraan oo fariimo kulul u kala diray dowladda Federaalka, IGAD iyo Beesha Caalamka, waxayna ku hanjabeen inay xiriirka u jari doonaan Dowladda federaalka Soomaaliyeed ee uu madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh, Haddii aaney joojin faragalinta ay ku hayso Shirka Maamul u sameynta, waa sida ay hadalka u dhigeene.
Duubabka dhaqanka Gobolka Hiiraan ayaa sheegay in aysan jirin wax ka quseeya Shirka Jowhar Gogoshiisu ay taalo oo lagu wado in Beri oo Isniin ah uu ka furmo Jowhar.
Dhaqanka Gobolka Hiiraan ayaa doonaya in Gobolka Hiiraan laga dhigo Labo Gobol isla markaana ay u arkaan wixii ka soo hara Caddaalad daro.
Dhowr jeer oo hore ayay Odayaasha iyo waxgaradka Reer Hiiraan ka soo horjeesteen qaabka lagu wado dhismaha maamulada loo sameynayo Shabeelaha dhexe iyo Hiiraan, iyadoo wadahadalo dhowr ahna ay kala sameystey dowlada federaalka kuwaasi oo fashil ku soo dhamaanayay.
Sawirada Banaan Baxa hoos ka daawo.